भक्तपुर / नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन) का विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट रुपमा राखेपछि पछिल्लो समय यो विषयले नेपाली राजनीतिमा चर्चा पाएको छ । मुलुकमा सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आठौं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा देउवाले एमसीसीको विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । देउवाको धारणालाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा अहिले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन जत्तिकै चर्चा चलाइएको छ । देउवाले एमसीसीको पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै विरोध गर्नेहरुले यसको राम्रो अध्ययन नै नगरेको दाबी गरेका थिए । उनले निकै नै मार्मिक ढंगले आफू नेपालको प्रधानमन्त्री समेत रहेको स्मरण गर्दै यदि एमसीसी आफ्नो देशको विरुद्धमा हुन्थ्यो भने आफूले त्यसको पक्षमा धारणा नै राख्न नसक्ने बताएका थिए । उनले एमसीसीमार्फत प्राप्त हुने रकमलाई फर्काउनु नपर्ने भएकाले यो अन्य अनुदान, ऋणभन्दा फरक रहेको भनी व्याख्या गरेका थिए । उनले ऋण सहयोग लिंदै गरेको स्मरण गराउँदै सित्तैमा आएको सहयोग रकम नलिने हो भने त्यसले विकास निर्माणलाई असहयोगमात्र पु¥याउने धारणा राखेका थिए ।
देउवाले उक्त सहयोग रकमको योजनाका विषयमा आफूले अध्ययन गरेको जानकारी दिंदै राजनीतिक वृत्तमा हल्ला गरिए जस्तो राष्ट्रघाति कुराहरु त्यहाँ उल्लेख नभएको दाबी गरेका थिए । उनले कुनै पनि सैन्य गतिविधि हुने कुरा आफूले उक्त संझौताका बुँदाहरुमा नदेखेको तथा त्यो सम्झौता नेपालको कानूनभन्दा माथि हुने गरी आएको भन्ने कुरा पनि निराधार रहेको भनी बताएका थिए । उनले यस विषयमा टिप्पणी गर्नेहरुलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्न अनुरोध समेत गरेका थिए ।
विभिन्न दलको गठबन्धनबाट बनेको वर्तमान सरकारका लागि यो विषय एकदमै पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले यो विषयलाई महत्वका साथ उठाएको अवस्था छ । अमेरिकी सरकार तथा दातृ निकायले समेत यस सहयोग सम्झौताका विषयमा नेपाल सरकारले स्पष्ट रुपमा आफ्नो धारणा राखोस् र निर्णय गरोस् भन्ने चाहेको छ ।
त्यसैले पनि देउवा यो विषयमा कुनै पनि निर्णयमा पुग्न चाहेको देखिन्छ । देउवाले यो विषयलाई संसदमा प्रवेश गराएर निर्णयमा पु¥याउने सोच लिएको स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । यो सम्झौता नेपालको संसदबाट पारित भएपछि मात्र त्यसले मान्यता पाउने भन्ने सर्त राखिएका कारण पनि देउवा यस विषयमा संसदले निर्णय गरोस् भन्ने पक्षमा देखिएका हुन् ।
अमेरिकाले पनि जे निर्णय गरे पनि आधिकारिक रुपमा निर्णय गरोस् भन्ने चाहना राख्दै आएको छ । त्यसैले पनि यस विषयलाई नअड्काउने पक्षमा देउवा देखिएका हुन् । उनले निर्णय जे भए पनि निर्णय गराएर यस विषयलाई टुंगोमा पु¥याउनु उचित हुने भन्ने ठानेको देउवाका निकटवर्तीहरुले बताउने गरेका छन् ।
यो विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनलाई लिएर धारणा राख्न नेपाली राजनीतिज्ञहरुले थालेका छन् । वर्तमान सरकार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भए पनि एकलौटी सरकार होइन । वर्तमान सरकारका मुख्य घटकहरुमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल रहेका छन् । त्यसैले कांग्रेस वा देउवाले चाहेरमात्र यो विषय संसदबाट पारित हुने अवस्थामा छैन । सरकारमा रहेका दलहरुको एउटै धारणा त्यो पनि पारित गरिनुपर्छ भन्नेमा आएमा मात्र यो विषय संसदबाट बहुमतबाट पारित हुनसक्छ नत्र भने सक्दैन । यसैगरी कि प्रतिपक्षमा बसेको नेकपा (एमाले) यो सम्झौताको पक्षमा स्पष्ट रुपमा उभिएमा मात्र यो सम्झौता सरकारका अन्य सहयोगी दलको समर्थन विना पनि पारित हुनसक्ने अवस्था रहन्छ ।
दाहाल र नेपालले के गर्लान् ?
यो विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले के गर्लान् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रुपमा उठेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल व्यक्तिगत रुपमा यस सम्झौताको पक्षमा रहेको भनी समाचार स्रोतले दाबी गरे पनि उनको दलमा यस सम्झौताको विरुद्धमा मत राख्नेहरुको संख्या बढी छ । सम्झौता नेपालको हितमा छ छैन भनी व्याख्या गर्ने अवस्था माओवादी केन्द्रमा पनि नरहेको भन्ने गरिन्छ । अध्यक्ष दाहालले चाहे पनि अरुले नचाहेको अवस्थामा यो विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्र पारित गर्ने पक्षमा संस्थागत रुपमा देखिने संभावना एकदमै न्यून रहेको राजनीतिक विश्लेषक भवानीप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार माओवादी भित्र एमसीसीलाई नबुझेको जमात बढी छ, त्यसैले यसको पक्षमा मत जाहेर गर्ने संभावना कमै छ ।
यसैगरी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल यसको पक्षमा नै देखिए पनि यसलाई संस्थागत निर्णय गराउन सक्ने अवस्थामा उनी पनि नरहेको बताइन्छ । अध्यक्ष नेपालका समकक्षी पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल यो संझौताको पक्षमा रहेका छैनन् । उनको नेतृत्वमा यस सम्झौताको बारेमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलमा रहँदा उनको धारणा यो सम्झौतामा व्यापक परिमार्जन गरेर मात्र पारित गर्न सकिने भन्ने रहेको छ । उनले सम्झौतामा रहेका कमी कमजोरीहरुलाई हटाएर नेपालको हित हुने गरी मात्र पारित गर्न सकिने नत्र गर्नु नहुने भन्ने खालको धारणा राख्दै आएका छन् । त्यसैले यस दलले पनि यस सम्झौताको पक्षमा स्पष्ट रुपमा धारणा राख्ने संभावना एकदमै न्यून देखिएको बताइन्छ ।
जसपाले के गर्ला ?
सत्तारुढ दल जसपाले यो विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा नराख्ने संभावना बढी रहेको बताइन्छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दल यस विषयमा स्पष्ट रुपमा पक्षमा नदेखिने अवस्था आएमा जसपाले भने आफ्नो धारणालाई दोधारे अवस्थामा राख्ने संभावना बढी रहेको बताइन्छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई यस सम्झौताको पक्षमा रहेको स्थिति छ । उनीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत धारणामा सम्झौताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने भए पनि अन्य दलहरुको स्पष्ट धारणा नआउने भएकाले जसपाले पनि दोधारे नीतिलाई अघि सार्ने संभावना रहेको बताइन्छ । जसपाले अन्य दलहरु सहमत भएका खण्डमा आफ्नो दल पनि सहमतिमा पुग्ने भन्ने खालको धारणालाई अघि सार्ने संभावना प्रवल रहेको बताइन्छ ।
कांग्रेस बढी पक्षमा
सत्तारुढ दलहरुमध्ये नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका देउवाले यस सम्झौतामा कुनै नराम्रो पक्ष नदेखेको तथा राष्ट्रघात नहुने अवस्था भनी व्याख्या गरेको अवस्थामा कांग्रेसमा पनि यो विषय विवादित अवस्थामा रहने देखिन्छ । कांग्रेसमा यो विषयमा पारित गर्दा नै हुन्छ भन्ने नेताहरुको बहुमत पुग्ने अवस्था रहने देखिने समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर, यसरी नेताहरु पक्षमा देखिए पनि कांग्रेसका नेताहरु यस सम्झौतामा कुनै कमी कमजोरी देखिएका छन् भने तिनीहरुको निराकरण गरेर मात्र पक्षमा रहनु उचित हुने भन्ने पक्षमा देखिने बताइन्छ । यसैगरी कांग्रेसले संस्थागत रुपमा पक्षमा निर्णय गर्ने भन्दा पनि यस विषयलाई संसदमा प्रवेश गराई निर्णयमा पुग्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने संभावना रहन्छ । आफ्नो दलले मात्र चाहेर यो विषय निर्णयमा पुग्न नसक्ने अवस्थामा संसदमा यो विषयलाई प्रवेश गराई कुनै पनि निर्णयमा पुगी टुंग्याउनुपर्ने भन्ने आफ्नो दलको धारणा भनी कांग्रेसले भन्न सक्ने बताइन्छ ।
एमाले मौन तर सरकारको विरुद्धमा
यसैगरी यो विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को चासो र रणनीतिलाई बढी महत्वका साथ हेरिएको छ । हालका प्रधानमन्त्री देउवाभन्दा अघि प्रधानमन्त्री पदमा आसीन एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्रीमा बहाल रहँदा एमसीसी पारित गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा थिए । उनले त्यो समयमा दिएका अभिव्यक्तिहरु अहिले पनि सामाजिक सञ्जालहरुमा आइरहेका छन् । यसैगरी ओलीका सल्लाहकारका रुपमा रहेका व्यक्तिहरुले त एमसीसी अक्षरस पारित गरिनुपर्छ र यो पारित गर्नका लागि कुनै संशोधन जरुरी छैन भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।
पछिल्लो समयमा एमाले प्रतिपक्षमा पुगेपछि यो विषयलाई लिएर एमाले खासगरी यसका अध्यक्ष ओलीले यसलाई ‘एक तीरले तीन निशाना लगाउने’ खेलको रुपमा लिएको देखिन्छ । यस विषयलाई लिएर ओलीको मुख्य चाहना भने वर्तमान सरकारको गठबन्धनलाई टुटाउनु रहेको बताइन्छ । ओली जे गर्दा यो गठबन्धन टुट्छ त्यो कार्य गर्नका लागि तयारी मनस्थिति बनाएर बसेको बताइन्छ ।
वर्तमान सरकारका गठबन्धनकारी दलहरु एमसीसीको पक्षमा देखिएमा आफ्नो दललाई त्यसको विपक्षमा राखी वर्तमान सरकारले राष्ट्रघाती काम गरो भनी भन्ने र त्यसलाई चुनावी नारा बनाउने सोंच ओलीले लिएको बताइन्छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री देउवाको दल कांग्रेसको पूर्ण समर्थन एमसीसीको पक्षमा रहन सक्ने अवस्था आउने तथा सत्तारुढ अन्य दलहरु त्यसको विरोधमा रहने अवस्थामा एमालेले कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने नीति लिने बताइन्छ । त्यसो हुँदा वर्तमान सरकारी गठबन्धन टुट्न जाने तथा मौका परे कांग्रेससँग मिलेर सरकारमा सामेल भै आगामी चुनाव गराउने रणनीति ओलीले लिने संभावना बढी रहेको बताइन्छ ।
देउवाको व्यक्तिगत चाहना
प्रधानमन्त्री देउवाको व्यक्तिगत चाहना भने सकेसम्म यो सम्झौतालाई पारित गराउने रहेको समाचार स्रोतको दाबी छ । उनले पारित गराउन प्रयास गर्ने, पारित नभएमा ‘आफूले प्रयास गरेकै हो पारित भएन त के गर्ने ?’ भनी चित्त बुझाउने बताइएको छ । पारित भएका खण्डमा त्यो सम्झौतामार्फत प्राप्त हुने सहयोग रकमलाई नेपालको विकास निर्माणमा लगाई जनताको मत जित्ने सोँच देउवाले लिएको बताइन्छ । यसैगरी पारित नभएका खण्डमा यो विषयलाई सधैं समस्याको रुपमा लिनुभन्दा संसदमा पेश गरेर एउटा निर्णयमा आफूले पु¥याएको भन्ने जस लिने रहेको पनि समाचार स्रोतको दाबी छ ।